निता भन्छिन्, ब्रेकअप भएको दुई महिना त दिन कटाउनै गाह्रो भयो - Forseenetwork : Nepalko entertainment web site : nepali cinema & Gossip : nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : nepali art ,music , manoranjan & more
अपडेटसिनेमाहाँस्य/व्यंग्यअफलाईनबलिउड हलिउडExtrasबिशेष रगंमञ्च	साहित्य
गीत/संगीतKHULDULEEसम्पर्क LISTEN LIVE Breaking
यस्तो छ नागिनकोे गोल्ड लुक
६ घण्टा नपुग्दै २ लाख पटक हेरियो ‘छक्का पञ्जा २’ को गीत
कंगना तरवार लागेर घाइते निधारमा १५ टाँका
गायक पुरुषोत्तम न्यौपानेले कोलोराडोमा आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुति दिने
राजेश खन्नालाई जयाले भनेकि थिइन “हेर्दै जानु अमिताभ कहाँ पुग्छ”
ए मेरो हजुरको ट्रेलर सगै छक्का पन्जा–२ को पहिलो गीत पनि
निता भन्छिन्, ब्रेकअप भएको दुई महिना त दिन कटाउनै गाह्रो भयो
०५ पुस २०७३ | Forseenetwork
loading... अभिनेता आमेश भण्डारीसँग ब्रेकअप भएपछि अभिनेत्री निता ढुङगानाले पहिलो पटक मिडियासँग खुलेर कुराकानी गरेकी छिन् । हालै एक यु ट्युब च्यानलसँय कुरा गर्दै उनले आमेशले नै आफूलाई प्रेम नभयर सिनेमा रोज्न सल्लाह दिएको बताएकी छिन् । निताका अनुसार सम्बन्धमा फाटो ल्याउने काम आमेशले नै गरेका थिए । आमेशले नितालाई, तिमी सिनेमाको लागि जन्मेको मान्छे भन्दै यो अमुल्य समयलाई मायामा भन्दा पनि करिअरमा दिनु पर्ने सुझाएपछि निता आमेशबाट टाढिएकी रहिछिन् ।
ब्रेकअपका बारेमा सोधीएका प्रश्नको जवाफ दिँदै निताले आफ्नो प्रेम पहिले आमेश सँग भएको अहिले नभएको स्पष्ट पारिन् । तर निताको बोल्नै शैली र उनको हाउभाउले ब्रेकअपले उनलाई निकै तनाव दिएको स्पष्ट देखिन्थ्यो ।
ब्रेकअप भएको दुई महिना त दिन कटाउनै गाह्रो भयो
ब्रेकअप हुँदा कत्तिको गाह्रो भयो भन्ने प्रश्नमा निताल भनिन्, “मर्नु हुन्छ नी हौ हुन त । ब्रेकअप भएको दुई महिना त मलाई दिन कटाउनै गाह्रो भयो । त्यो पीडा कस्तो थियो त्यो त मलाई मात्रै थाहा छ । तर पछि मैलै आफूलाई सम्हालेँ । आफ्नै आमा मरेर जाँदा त सहनु पर्यो भने ऊ त जिउँदो छ । उसले केही गरेको देख्न पक्कै पाउँछु जस्तो लाग्यो र आफूलाई सम्हालेँ ।
घरमा पालेको जनावरको त माया लाग्छ भने आफूले माया गरेको मान्छे हो ऊ त । माया गरेको मान्छेसँग छुट्टिँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरुलाई पनि थाहा छ । आफूले माया गरेको मान्छेसँग छुट्टिदा गाह्रो नहुने त कुरै छैन नी ।”
आमेशको आदेश अनुसार काम गरेँ मैल
आमेशले नै प्रेमले करिअरमा घाटा भएको भन्दै नितालाई काममा फोकस गर्न भनेका रहेछन् । आमेशले नितालाई सिनेमाकै लागि जन्मेको केटी भन्दै अहिले मायामा भन्दा पनि काममा ध्यान दिनुपर्ने सुझाए पछि निता आमेश बाट टाढिएको बताईन् । ब्रेकअप भएपछि उनीहरुको सम्पर्क पनि हुन छाडेको छ । निताले अन्य साथीभाईहरुबाट आमेशको खबर थाहा पाउँदा खुसी लाग्ने आफू यस्तै खबरहरुबाट सन्तुष्ट हुने गरेको पनि बताईन् ।
एकअर्काको प्रेममा हुँदा दुई सिनेमामा पर्दा बाँडेका उनीहरुले एकअर्कालाई किस गरेर तस्वीरको लागि पोज दिएको कुराले पनि निकै चर्चा पाएको थियो । आमेश र निताले तँ म र ऊ र फूलै फूलको मौसम तिमीलाईमा पर्दा बाँडेका छन् ।
‘फूलै फूलको मौसम तिमीलाई’ फ्ल्प भएपछि मेरो फोटो पनि खिचिएन– आमेश भण्डारी
आमेश भण्डारी काम भन्दा पनि उनीसंग जोडिएको नामले चिनिएका हिरोको रुपमा परिचित छन् । नायिका निता ढुङगानासंगको प्रेमले उनलाई चर्चामा ल्याएक..
ब्रेकअपपछि पहिलो पटक बोले आमेश, किन भएको थियो ब्रेकअप ?
तँ म र ऊलाई पर्दै निता र आमेशको ब्रेकअपको असर
फेसबुकबाट भेटीएका चर्चीत सेलिब्रेटी जोडी
सुनिल रावललाई लागेको आरोप सहि हो– प्रकृति श्रेष्ठ
‘सायद २’ की अभिनेत्री स्यारोन श्रेष्ठले निर्माता सुनिल रावलमाथि लगाएको आरोपले यतिबेला सिने नगरी तातेको छ । स्यारोनको सपोर्ट गर्दै अर्की..
कैयौँ जन्म दिनमा एक्लै केक काटेका पुष्पल २८ वर्ष लागे
जस्ले केश मुण्डन गरे कसैले शोखले कसैले कथाले मागेपछि
निखिल उप्रेतीको आक्रोश, नेपालीको नागरिकता पछाडि निगेटिभ सोच भनेर राख्नु
गरिमा विकिनीमा देखिँदा सबै छक्क !
“कुटुमा कुटु” ले करोड पार गरेको खुसीयालीमा केक
किताव पढ्नु, नाटक र सिनेमा हेर्नु उस्तै हो– “धनपती” नायक खगेन्द्र लामिछाने
होमवर्कको बाहानामा केटाहरु घर आउँथे, एक चोटी पक्डिएको छु– “धनपति” नायिका सुरक्षा पन्त
नायिका सुरक्षा पन्त आलोक नेम्बाङ्गको सिनेमा “अझै पनि” बाट सिनेमा क्षेत्रमा आएकी हुन् । प..
घर कडा भएका कारण लव पार्ने गर्नै पाईएन–प्रदिप खड्का
अभिनेता प्रदिप खड्का अभिनित सिनेमा ‘प्रेम–गीत २’ साउन १३ गते रिलिज हुँदैछ । उनले आफ्नै प..
पैसा तिर्नुपर्छ भनेर त्यो बाटो २ वर्ष सम्म हिडिन्ः नायक पल शाह
अभिनेता पल शाहको सिनेमा “म यस्तो गीत गाउँछु” असारको ३० गते रिलिज हुदैछ । सिनमाको ट्रेलर ..
धरैले पढेको सुनिल रावललाई लागेको आरोप सहि हो– प्रकृति श्रेष्ठ
‘सायद २’ की अभिनेत्री स्यारोन श्रेष्ठले निर्माता सुनिल रावलम...
सिनेमा छक्का पन्जा–२ को टिजरलाई यूटूबमा धेरैले माया गरेका छन...
Team Member : Lokraj Adhikari, Radhika Kandel, Sanjip Shrestha, Niraj NiraulaCopyright Forsee Network Pvt. Ltd. 2017, All Rights Reserved
Top Floor, Omkar Building Naya Baneshwor,Kathmandu, Nepal
forseenetwork@gmail.com Follow @forseenetwork